Mpanakanto Gineana Ekoateriana Carmen Bolena Mitantara Ny Tantarany Sy Ny Maha-izy Azy Amin’ny Alalan’ny Sary · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Novambra 2017 9:23 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, русский, Português, Français, Español
Lahatsoratra avy amin'ilay mpanao gazety Lucia Mbomio ity izay navoaka voalohany tao amin'ny Afrofeminas ary naverin'ny Global Voices navoaka indray rehefa nahazoana alalana.
CB: Mampangovitra ahy izany fanontaniana izany, hahaha. Andeha hojerena, tia manontany antsika izay nianatra zavakanto (manana ny fijeriko manokana aho rehefa miteny hoe “mpanakanto”) ny olona hoe: inona izany zavakanto. Ny zavakanto tenany dia hevitra saro-takarina fa tsy hoe sarotra faritana satria miovaova hatrany izy. Miova ny famaritana azy ary mifandray amin'ny vanim-potoana nanaovana azy. Noho izany, ny fanontaniana hoe “tokony ho mihoatra noho ny hatsarana, ny ideolojika, mpitondra fiovana ve ny zavakanto?” Dia hovaliako avy amin'ny fijery manokana tanteraka: Mety ho izany, saingy tsy voatery. Anisan'ireo izay mihevitra aho fa ny zavakanto dia mety hahatonga anao hahatsapa fa tsy manery anao hieritreritra, saingy tsy mamela anao tsy hiraharaha izany. Ho ahy, fahatsapana sy hatsarana miovaova ny zavakanto, satria mahita hatsarana amin'ny Girl with a Pearl Earring” an'i [Vermeer] aho na ny an'i [Van Gogh] “Starry Night over the Rhône”. Mahita hatsarana amin'ny “Saturn Devouring His Son” an'i Goya sy ny asan'i Mark Ryden, Michael Hussar na Edward Gorey aho. Saingy, raha ny marina, ny sary lazainao dia manao fanambarana ideolojika: Sarin'ny tena miaraka amin'ny tarehy mbola tsy vita ny antsasany, ary ny atsasany tapaka, mampiseho hozatra, hozatry ny vodi-tongotra, ary ny hoza-madinika. Fandalinana anatomika izany, izay midika fa ny zavatra tena ilaina dia ny tsy hita amin'ny maso. Ny Eoropeana, ny Afrikana ary ny Aziatika dia mitovy amin'izany izay lasa fitaovana politika: ny lokon'ny hoditra. Ambonin'izany rehetra izany, olombelona isika, mitovy firazanana, taranak'olombelona.
Tena fiovana lehibe ny fandehanana nianatra tany Madrid na ny fihaonana amin'ireo vondrona tahaka ny Kwanzza [vondrom-pirahamonin'ny mpianatra taranaka Afrikanina ao amin'ny Oniversiten'i Complutense ao Madrid] sy ny E.F.A.E [Fikambanana natao “hanomezan-kery ho an'ireo vehivavy Afrikanina’ any Espaina]. Hitako fa maro kokoa ny olona toa ahy, tsy irery aho ary marobe izahay! Hahaha. Mahafinaritra ny mahita fa teo aminay, nisy ireo mpianatry ny oniversite momba ny politika, ny fanaovan-gazety, ny filôzôfia, ny zavakanto, ny siansa….niparitaka izy ireo, niparitaka tamin'ny sehatra maro izahay. Nanomboka namaky boky sy nikaroka aho, nandeha tany amin'ny fihaonambe ary nifandray tamin'ny fiarahamonina ary sambany hatramin'ny nialako an'i Afrika, nahatsapa aho fa anisan'ny ao anatin'ny zavatra iray. Ankoatra ny satako amin'ny maha zaza natsangana, izay raha marina, afaka manantena anay ianao.